cadnaan kapul – Page 20 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Mareykanka Oo Shaaciyay Tirada Ciidamada Iyo Saraakiisha Al Shabaab Looga Dilay Gobalka Mudug
Bayaan ka soo baxay taliska ciidamada militariga Mareykanka ee Africom ayaa lagu faah faahiyay weeraro dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameyd saday saldhigyada ciidamada Al shabaab. Warka kasoo baxay Taliska Africom ayaa looga hadlay ilaa 6 weerar ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug Bishan November, halkaasi oo ay maamulaan Xoogaga Alqaacidda ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegaya Duqeymahaasi in ...
Ciidamo Wata Gadiidka Dagaalka Oo Saakay Ku Qul Qulaya Duleedka Marka
Waxaa sakay dhaq dhaqaaq ciidan laga dareemaya deegano hoos yimaada degmada Marka. Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobalka Sh/hoose ayaa Simba u xaqiijiyay in ciidamo fara badan saakay ay ku qul qulayaan deegaanada Gandarshe iyo Jilib marka ee hoos taga caasimada gobalka. “Howlgalka waa uu socdaa sido kale ciidamo fara badan oo katirsan dowladda ayaa saakay halkaasi loo daad gureeyay si ...
Dhageyso:- Warka Subaxnimo Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Khamiis ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 29.11.2018
Ustaad Abdalla Oo Lagu Dilay Afgooye Iyo Maamulka Degmada Oo Iska Indha Tiray
kooxo ku hubeysan bastoolado ayaa gudaha degmada afgooye ku dilay maamule iskuul oo lagu magacaabi jiray Cumar Mahad Abdi Ustaad Abdalla, xili uu ku sugnaa xafiiskiisa Afgooye. Goobjooge ku sugan Afgooye ayaa Simba u sheegay in tiro dhalinyaro ah ay gudaha u galeen iskuul ku yaal degmada Afgooye, halkasina ay ku toogteen maamulkii iskuulka oo lagu magacaabi jiray Abdalla. Gudoomiyaha ...
Xuseen Maxamed Xuseen oo caawa La Dilay
Kooxo hubeysan ayaa Macalin Xuseen Maxamed Xuseen Caawa ku dilay Xaafadda Coca Cola ee Degmada Yaaqshiid. Iskuulka Al Kifaaf ee Xaafadda Coca Cola Degmada Yaaqshiid ku yaal ayuu Macalin ka ahaa, lama oga sababta loo dilay, balse wararka qaar ayaa sheegaya inuu katirsanaa Kooxda Daacish ee Soomaaliya. Maamulka degmad Yaaqshid oo xiriiro Simba ay la sameysay ayaa ka gaabsaday iney ...
DEG DEG: Yaaa Ka Danbeeyay Weerarka Lagu Dilay Cabdi-weli Cali Cilmi 10 katirsanaa Ilaaladiisa
Aroornimadii hore ee saaka, ciidamo katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa howlgal xoogan ku qaaday guri uu magaalada Gaalkacyo ka degnaa Cabdi-weli Cali Cilmi oo ahaa Ninkii sheegtay Inuu yahay Nabi. Al shabaab ayaa faah faahiyay qaabka uu weerarka u dhacay iyo khasaaaraha ka dhashay. “Howlgalka waxaa lagu daahfuray camaliyad Nafhurnimo ah, waxaana markaas kadib guriga saldhiga u ahaa ninkan u daatay ...
Deg Deg:-Wadaad Sheegtay in Nabi Maxamed Xiriir La Leeyahay uu Lagu Weeraray Gaalkacyo
Warar kala duwa ayaa laga helayaa qaraxyo lagu weeraray Xaruntii uu deganaa Ninkii Nebiga Sheegtay C/wali Cilmi Af-yare Sidaas Goor dhaw Waxaa idaacadda Simba u Xaqiijiyay Taliye Ku Xigeenka qaybta booliska Gobolka Mudug Max’ud Cilmi Gullaafe. Wadaadkaan sheegtay inuu xiriir toos la leeyahay Nabi Muxamed Scw ayaa ku caan baxay isaga iyo xirtiisa iney sheegtaan Xir Toos ugu xiran Nabi Muxamed. Cabdiweli Sheekh ...
Hilaal Xirsi Jaamac, oo Xalay La Dilay+Sawirro
Kooxo hubeysnaa ayaa xalay dalka koonfur afrika waxa ay ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa Ganacsatada dalkaas. Dilkaan ayaa ka dhacay Xaafadda Hanover Park oo hoos timaadda Magaalada Cape Town. Muwaadinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Hilaal Xirsi Jaamace,wuxuuna sanado badan ku noolaa dalkaas. Hilaal, ayaa sida ay Goobjoogayaasha inoo xaqiijiyeen waxaa rasaas ku furay tuugo gangiistaro midab ...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Turkiga Mudane Rajab Dayib Ordogaan oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalad Istanbuul ayaa ka wada hadlay sare u qaadista xiriirka labada dal, xoojinta iskaashiga, wadajirka iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya labada shacab. Labada Madaxweyne ayaa isku afgartay in la dardargeliyo kaalinta ay dowladda Turkigu ka qaadanayso amniga, ...
Shaqaale Qaramada Midoobey oo Lagu Weeraray Degmada Walaweyn
Maleeshiyaad hubeysan ayaa rasaasayey shaqaale ka tirsan Hay’ada Qarmada Midoobey u qaabilsan Cunada Aduunka ee WFP kuwaasi oo arimo samafal u tagay degmada Walaweyn ee Gobalka Shabeelaha Hoose. Maleeshiyaadka Weeraray Shaqaalaha Samafalka ee Qaramada Midoobay ayaa ka soo horjeeday qeybinta raashin gargaar ah oo la gaarsiiyey Degmadaasi,waxaa ayna doonayeen inay raashinka Boobaan ka hor inta aan loo qeybin dadka danyarta ...